Kushongedza mazano kune minimalist Kisimusi tafura | Bezzia
Kushongedza mazano kune minimalist Kisimusi tafura
Maria vazquez | 03/12/2021 18:00 | Yakagadziridzwa ku 30/11/2021 20:33 | Decoration
Matafura edu eKisimusi anowanzo kuve ane zvishoma zvishoma, asi setsika dzese izvi zviri kuchinjawo mudzimba zhinji. Kune vazhinji vedu vanobheja kwete mumwe chete minimalist decor, asiwo yemenu yakareruka. Uye zvirokwazvo kana iwe ukaona mazano edu ekushongedza minimalist tafura yeKisimusi iwe uchave zvimwe.
Tafura yeminimalist haifanirwe kuve yakapusa, inofinha, kana kusanyanya kufara sezvo mune dzimwe nhaurirano inosimbiswa. Ichokwadi kuti iwo matafura anofema uye umo zvinhu zvekushongedza zviri nyore, asi kana zvakakodzera zvakasarudzwa, hapazovi nekukahadzika pamusoro pezvinopembererwa.
Mifananidzo yebutiro inotikurudzira kuti tive nemhedziso yezvatinoreva netafura yeminimalist. Iwo matafura umo mavara asina kwaakarerekera anosarudzwa, kunyangwe zvingave zvisiri izvo, uye mune ipi zvinhu zvinoratidzwa zvishoma asi zvakasarudzwa.
1 Micheka yepatafura
3 Details with napkin
Iwo machira etafura patafura yeaya maitiro ane basa rakakura, kunyangwe isingakweve zvakanyanya kutariswa. Ingredients dzinowanikwa nekubheja pa magadzirirwo mumachira echisikigo izvo zvinounza kunaka uye kuzvidzora patafura.
Mucheka wakachena kana wakachena grey yerineni yejira nguva dzose kubudirira kushongedza rudzi urwu rwetafura. Iwo mavara asingatiganhuriri uye anogara achienderana neiyo chena tableware yatinayo kumba. Nekuda kwaro, mavara sebrown kana dema Izvo zvakanaka kune avo vari kutsvaga tafura ine simba rakawanda.
Zvinonakidza kuti pakati pemachira etafura uye crockery pane kumwe kusiyanisa. Saka, patafura ine chena yerineni, iyo yakanakira yaizove yekuisa tableware muchiedza grey toni uye zvinopesana. Uye nenzira imwecheteyo, patafura ine jira rakasviba, mahwendefa madema acharamba achitaridzika zvakanaka.
Kunyangwe iyi misiyano midiki parizvino iri maitiro, usasiye pfungwa yekugadzira a tafura ye monochromatic kubatanidza tafura yerineni uye tableware yemuvara wakafanana. Uku kubheja kunonyanya kunakidza kana tichitaura nezve chena uye kunyanya dema. Kana zvasvika kune dema, kubheja zvese pane dema ndiyo yakanakisa sarudzo.
Iyo napkin iri mundiro inogona kuperekedzwa neimwe diki diki. Muchokwadi, batanidza mashoko akaitwa nemaoko Kufanana nekadhibhodhi nyeredzi kana maapuro chips mumufananidzo uri pamusoro, inogona kuva yakanaka kubata kune vaenzi vedu.
Unogona kubatanidza izvi nezvimwe zvaunogona kuwana mu kufamba kudiki mupaki padyo (mapazi, mashizha, pinecones ...) kana mune yako pantry (anise nyeredzi, sinamoni tsvimbo ...). Kuti upedze seti iwe unongoda tambo kana uta.
Patafura yeKisimusi ine minimalist hapana chikonzero chekusiya chikamu chepakati. Dzimwe nguva, isu tinofunga zvisiri izvo kuti nzvimbo yeminimalist ndiyo yatinosiya zvinhu zvekushongedza uye hapana chinopfuura kubva kune chokwadi. Izvo zvatinokuratidza pazasi, semuenzaniso, zvinokwana zvakakwana mumatafura emhando iyi.
Iwe haufanirwe kunge wakanyanya kuomarara kuti ugadzire centerpieces yekushongedza iyo minimalist tafura. Tsime kana ndiro yendiro imwe chete inogona kushanda setsigiro yekuisa imwe makenduru uye zvimwe zvezvirimwa izvo zvinopa ruvara uye vhoriyamu. Moss uye mamwe matavi ane mashizha kana iwe uchitsvaga iyo kutsva kwakajairika yemhando dzakasiyana dzegirinhi; Mapineapples nematavi akaoma kana iwe uchida kunyorova kwematoni ebrown.
Makenduru anogara achibudirira nekuti anotitendera kuti tigadzire mamiriro emukamuri, tisati tapedza uye mushure mekudya kwemanheru. Uye kuwedzera kune dzakataurwa dzemiti nzvimbo, unogona kudziisa patafura mazuva ano kugadzira chandeliers kana mumabhora emapuranga akafanana neaunoona mumifananidzo. Izvi, pamwe chete nezvimwe zvinhu zvehuni zvakanakira kudzokorora tafura ye nordic maitiro uye ugouyisa kudziyirwa, haubvumi here?
Iwe unofarira aya mazano ekushongedza kune minimalist Kisimusi tafura?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Kushongedza mazano kune minimalist Kisimusi tafura
5 mibvunzo nezve ADHD muvana
Mazano ekubatanidza leggings kwese nguva yezuva